Fomba 3 hananganana ny lisitry ny mpanjifa ao amin'ny fantsona YouTube - Ny tari-dalantsika - YTpals
Amin'ireo mpampiasa isan-karazany afaka mahita ny fantsonao dia ireo mpamandrika izay anananao no ampahany manandanja indrindra amin'ny YouTube izay mandray anjara betsaka amin'ny atiny.
Raha tsotra toy izao ity fampahalalana ity, ny ankamaroan'ny mpamorona atiny dia miafara amin'ny fahadisoana lehibe manadino ny maha-zava-dehibe ny fananganana lisitr'ireo mpanjifany miaraka amina paikady. Raha jerena ny zava-misy fa ny mpampiasa dia misoratra anarana amin'ny fantsonao amin'ny voalohany noho ny kalitaon'ny atiny, ny fananana paikady video izay manaraka io fitsipika io ihany dia hiteraka mpamandrika bebe kokoa.
Miaraka amin'ny fampiroboroboana ny atiny ho avy sy ny paikady matanjaka, azonao atao ny manintona ny saina bebe kokoa amin'ny fantsonao, izay mitarika tsy fidiny ho an'ny mpamaky bebe kokoa. Ny fananganana ny lisitry ny mpamandrika anefa dia mihoatra lavitra ny filazanao ny mpijery hoe "tia, mizara ary misoratra anarana" mandra-pahatonganao ho toy ny rakitsoratra tapaka. Raha ny marina, ny lakilen'ny fanintonana ny mpamaky maro dia miankina amin'ny fampiasam-bola antsoina fiaraha-monina.
Inona avy ireo vondrom-piarahamonina?
Ny vondrom-piarahamonina YouTube, raha fintinina, dia sehatra ao anatin'ny sehatry ny horonantsary mihitsy izay natokana ho an'ny tanjona manokana na antony iray ary hiasa ho toy ny ivon-toerana izay ahafahan'ny mpampiasa manangona sy mifanakalo hevitra momba ny lohahevitra asongadiny. Raha ny YouTube Creator Playbook tenany ihany, “manakiana ny fananganana mpihaino ao amin'ny YouTube ny vondrom-piarahamonina. Rehefa dinihina tokoa, dia sehatra sosialy [izy] [izay] ny filàna, fizarana ary fanehoan-kevitra no lafin-javatra lehibe eo amin'ny fiaraha-monina."
Amin'ny alàlan'ny famoronana paikady video mahomby, azonao ampiasaina ny hery iraisana amin'ny fanangonana mpanjifa YouTube any amin'ireo vondrom-piarahamonina amin'ny alàlan'ny famoronana votoaty mety hanintona ny zana-bahoaka manontolo na ny faritra misy azy. Na inona na inona antony tianao hampiorina ny mpihaino anao na hampitomboana ny mpikirakira fantsonao dia ireto misy torohevitra telo tsotra nefa mahomby azonao ampiasaina:
Andramo manontany azy ireo aloha
Rehefa mitsambikina ao anaty vondrom-piarahamonina izay mihatra indrindra amin'ny karazan-atiny apetrakao ianao, ny fomba voalohany dia ny mangataka amin'ny mpampiasa rehetra hisoratra anarana amin'ny fantsonao. Raha afaka miteny mora foana amin'ny olona sendra azy ny fantsonao fa mendrika ny hisoratra anarana izy, azo antoka ny milaza fa manana be dia be ny mpamandrika miditra ao. Azonao atao ny mametraka ny famandrihana alohan'ny fametahana ny horonan-tsarinao. fampidirana, na lahatsoratra fohy sy mamy avy amin'ny fiaraha-monina.
Tandremo ny fanamarihana nataonao
Tsotra araka ny fahitana azy ireo, angamba ny fanamarihana no fitaovana ambanin-javatra kely indrindra azon'ireo mpamorona atiny ampiasaina hampiasana ny saina, hisarika ny mpihaino ary hijerena faran'izay kely indrindra araka izay tratra. Miaraka amin'ny fanampian'ny YouTube Cards ary Karatra farany fitaovana, azonao atao ny manararaotra tsara ny fanazavana ampidirinao ao anaty horonan-tsarinao.
Ny famandrihana fantsona, indrindra, no nanamora ny fahazoana azy noho ny fanampian'ny fitaovana Cards sy End Cards. Tsara anefa ny manamarika fa ny toerana misy ny fanamarihana nataonao teo amin'ny efijery, ny fotoanany ary ny lahatsoratra tafiditra ao aminy dia mety hisy fiatraikany amin'ny fahombiazan'izy ireo, koa alao antoka fa hijery tsara ireo antsipiriany tena lehibe ireo ianao.
Midira amin'ny fiaraha-monina misy anao
Amin'ny faran'ny andro, ny mpampiasa YouTube — sahala amin'ny mpampiasa media sosialy hafa — te-hifanerasera amin'ny fantsona samihafa na mpamorona atiny izay mahaliana ny fahalianan'izy ireo. Ataovy ao an-tsaina fa ny fifandraisana na ny fidirana amin'ny tamba-jotra amin'ny faritra misy ny fiarahamonina ao amin'ny YouTube dia fomba azo antoka hanangonana mpanjifa marobe. Ny firesahana amin'ireo mety ho mpankafy anao, ny famoahana momba ny atiny, ary ny famolavolana lahatsoratra iray fotsiny hisaorana ny olona manaraka anao dia ho ampy hisarika ny saina tsara sy hampiroborobo ny tahan'ny famandrihana anao!
Ankoatry ny famoronana atiny avo lenta, ny fanaovana fanitsiana vitsivitsy amin'ny fomba fampiasanao ny YouTube amin'ny maha mpamorona votoaty anao dia hampiakatra ny tahan'ny famandrihana anao amin'ny sisiny lehibe. Ireo torohevitra telo voalaza ato amin'ity lahatsoratra ity dia mety ho toa tsotra, saingy izy rehetra dia antsipiriany madinidinika misy fiatraikany lehibe izay nanampy ireo mpamorona atiny ambony YouTube hahita fahombiazana amin'ny ezaka kely.
Raha mitady ny mahazo mpamandrika youtube maimaim-poana, mifandraisa aminay anio hahitanao ny fomba hanampiantsika.
Fomba 3 hananganana ny lisitry ny mpanjifa ao amin'ny Channel YouTube - Ny toro-làlanay avy amin'i YTpals Writers, 23 Desambra 2019
Ahoana no ahafahan'ny orinasa mampiasa ny dokam-barotra amin'ny marketing amin'ny YouTube
Ny tontolon'ny marketing YouTube dia iray izay mivoatra hatrany. Ny endrika horonan-tsary, ny fironana ary ny fanamby dia miova haingana toy ny fizaran-taona, ary izao dia tena zava-dehibe noho ny hatramin'izay ny marika sy ny mpamorona atiny…
Rahoviana ianao no tsy mampiasa YouTube Intros sy Outros amin'ny atiny misy marika?
YouTubers dia mitady torohevitra sy tetika foana izay afaka mampiroborobo ny firotsahana horonantsary ao amin'ny fantsona YouTube azy. Fomba maro manampy ny YouTubers hahatratra izany. Ny iray amin'izy ireo dia ny manampy ny intro YouTube sy ny outros. Inona ny…
Maninona no tsy manana mpamandrika ampy ny fantsona YouTube anao
Tahaka ny fomba fiasan'ny oksizenina ho an'ny olona sy ny biby, ny mpamandrika dia ao anatin'ny ilain'ny fantsona YouTube anao sy ny horonantsary mijanona ho velona na eo aza ny fifaninanana mitombo. Amin'ny maha metrika lehibe an'i YouTube…